Ny Sénat amerikana dia nanentana ny hanaovana fihainoana momba ny fampiasan'ny kaompaniam-bola ny volan'ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Sénat amerikana dia nanentana ny hanaovana fihainoana momba ny fampiasan'ny kaompaniam-bola ny volan'ny COVID
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana dia nahazo vola mitentina $ 79 miliara natokana ho an'ny banky telo mifandraika amin'ny COVID tamin'ny taona 2020-2021 hanampiana azy ireo, ny mpiasan'izy ireo ary ny indostrian'ny fitsangantsanganana an'habakabaka tafavoaka velona amin'ny areti-mandringana COVID ratsy indrindra.
FlyersRights dia mangataka fihainoana fanaraha-maso miaraka amin'ny CEO CEO, ny mpiasa ary ny solontenan'ny mpandeha.
Ny Airlines dia nomena fanampiana ara-bola federaly hatramin'ny 2020.
Misy ny fanontanina raha nampiasa vola tamin'ny fomba ratsy ireo mpandoa hetra.
Ny filohan'ny FlyersRights Paul Hudson dia niantso ny vaomiera amerikana misahana ny varotra ho an'ny komity amerikana miaraka amin'ny CEO an'ny kaompaniam-pitaterana miampy ny solontenan'ny mpiasa sy ny mpandeha.
Filohan'ny FlyersRights Paul Hudson
Nanazava i Paul Hudson fa: "Ny zotram-piaramanidina dia nomena fanampiana federaly hatramin'ny taona 2020 mba hitazomana ny serivisy ho an'ny daholobe hatanjaka sy hampihena ny aretina COVID. Saingy ny fanafoanana farany ambony, ny fanemorana ny sidina, miampy fanoherana ny zotram-piaramanidina CDC sasany dia mametraka fanontaniana raha toa ka diso nampiasa ny volan'ny mpandoa hetra ny fitantananan'ny seranam-piaramanidina. ”
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana dia nahazo vola mitentina $ 79 miliara natokana ho an'ny banky telo mifandraika amin'ny COVID tamin'ny taona 2020-2021 hanampiana azy ireo sy ny mpiasan'izy ireo ary ny indostrian'ny fitsangantsanganana an'habakabaka tafavoaka velona amin'ny areti-mandringana COVID ratsy indrindra. Nokasain'ny Kaongresy ity vola ity handeha ho any amin'ny mpanamory fiaramanidina, mpanamory sidina ary mpiasan'ny seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina hafa mba hahazoana antoka fa karamaina izy ireo mandritra ny vanim-potoana fangatahana ketraka mafy ary hahazoana antoka fa hanana fahaiza-manao hamaly ny fitomboan'ny tinady ny zotram-piaramanidina raha vantany vao COVID. -19 nihatsara ny toe-javatra.
Ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, indrindra American Airlines, Spirit Airlines, ary Southwest Airlines, tsy nahomby tanteraka ny vahoaka amerikana. Nandritra ny fahavaratra dia nanafoanana sidina an-jatony isan'andro ny sidina satria tsy ampy ny mpiasa vonona handeha. Amin'ny andro ratsy indrindra, Fanahy Air Madagascar nofoanana ny antsasaky ny sidina voatondroany.
Tsy ekena izany, ary ny senatera Maria Cantwell, ny talen'ny komitin'ny varotra senat, dia nandefa taratasy momba io lohahevitra io tamin'ny zotram-piaramanidina tamin'ny volana jolay. Nihaona tamin'ny mpiasa ao aminy ny FlyersRights.org mba hiady hevitra momba ny olana ary hanolotra ny vahaolana amin'ireo fanararaotana farany nataon'ny zotram-piaramanidina.
FlyersRights.org Fanolorana fanaraha-maso ataon'ny komity hanerena an'i Doug Parker, Gary Kelly, Ted Christie ary ny CEO hafa amin'ny seranam-piaramanidina hafa hanazava ny zavatra nataon'izy ireo tamin'ny vola fanampiana COVID ary ny antony tsy nahavitan'ny seranam-piaramanidina ny fikasan'ny lalàna.
Ny fitsaram-bahoaka dia tokony ahitana solontena mpandeha sy solontenan'ny mpiasa. FlyersRights.org nanolotra a drafitra mandrisika sy manalavitra ny fiaraha-monina izay tokony hitazomana ny orinasam-pitaterana an'habakabaka, mihazakazaka amin'ny toerana avo kokoa mandritra ny areti-mandringana, ary ho azo antoka fa azo antoka kokoa ny dia an-habakabaka, amin'ny vidiny ambany noho ny fonosam-panafody avokoa.